Quotes Antoinette Brown Blackwell: UMphathiswa wamakhosikazi
UAntoinette Brown Blackwell (1825 - 1921)
UAntoinette Brown Blackwell wayengowesifazane wokuqala eMelika owamiselwa ibandla eliyinxalenye yesonto eliqhelekileyo, okanye elikhulu. Kwakhona ungumfundisi kunye nomloli wamalungelo amabhinqa, ukupheliswa, kunye nokuzimela - kunye nonina weentombi ezintlanu. Odadewabo, u- Elizabeth Blackwell kunye no- Emily Blackwell , babengamavulindlela njengamayeza asekuqaleni kwabasetyhini.
Ukhethiweyo lweAntoinette Brown Blackwell
• Njengomfazi ogxeka umyeni wakhe othobelayo kunye nenkonzo ethembekileyo, ekufundiseni ukulingana kwabantu kwamalungelo kunye namalungelo, andiyi kunika ukunyanzela kwindoda eyenziwe yindoda kunye nolawulo olulawulwa yindoda kwintsapho, ecaweni okanye kwilizwe.
Mna, ohlala kwaye ndibona ububi belo xesha elibi, kwaye waqala ukubhikisha ngentliziyo kunye nelizwi kwaye usabhikisha. Inxalenye yekamva yabasetyhini kwintlalo, inkolo, uluntu kunye nokwenza ihlabathi ekhaya kubonakala kuqhubeka.
• Sikholwa ngokupheleleyo, ngokukhawuleza xa sibona ukuba loo ntokazi yayisilungile, bonke bayeza kubona into efanayo ngokukhawuleza, kwaye ngaloo nyaka okanye ezimbini, ekugqibeleni, kuya kunikwa.
• Kwakukho amadoda athukutheleyo adibana nam kwaye ndababamba ukukhanya kweenyawo ezingcolileyo, kodwa ngaphezu kwam naphakathi kwam, kwakukho umoya onamandla kunabo bonke.
• Umfazi ufumana indawo engokwemvelo yomhlaba ngokungazi kakuhle; kwaye engacingi ukuba unyanzelekile ukuba abe ngumkhokeli kunye nefilosofi kunoma yimuphi umlandeli, uthatha ubuhlungu obuncinane bokumakisha indlela ayenzayo.
• Ukuba uxanduva lomfazi kuphela luhlobo lohlobo lwasekhaya, elinye iklasi liya kutyunjwa yilo, elinye lilahla njengebheji yentlupheko.
Isiqu esithi umntu ohluphekileyo, "Umsebenzi wabasetyhini awunakwenziwa," ukhokelela ngokungenakuqinisekiswa kwintsebenziswano yawo - abafazi abazange baqalwe.
• Wonke umama onesihlengikazi, phakathi komntwana wakhe omncinci, unelungelo elihle kakhulu lokumhlophe, ukukrazula okanye ukutshitshisa, njengokuba isimo sengqondo sichaza, kuba i-beefsteak kunye nekhofi ayilungiselelwe yona kunye ncam, nokuba kunjani na umntu owake wakhona okanye unako ukufumana ngexesha leli xesha lokuziphendukela kwabantu.
• ... wandibuza ngelinye ilanga ukuba kubonakala ngathi ukuyeka kakhulu ngenxa yakho. Mndishiye ukhululekileyo, njengokuba ukhululekile njengoko wena kwaye wonke umntu umele abe, kwaye akushiyi nto.
• Ingqondo ayikho, kwaye ayikwazi ukuba yiyo, iyodwa okanye igqibeleleyo ilungu leengcamango nokuvakalelwa.
• UMnu. Darwin ... uyehlulekile ukubambelela phambi kwengqondo yakhe umgaqo wokuba ulwahlulo lwesini, nokuba yintoni enokuthi iqulethe kuyo, kufuneka ukuba lube phantsi kokukhethwa kwendalo kunye nokuziphendukela kwemvelo.
• Ubume banele; kodwa amadoda nabasetyhini mabaqonde kwaye bamkele iingcebiso zakhe.
• Ubundlobongela kwiintlobo zonke zokuba ... zihlala zilingana ezilinganayo-ezilinganayo kodwa ezingafaniyo.
• Umsebenzi, owenziwe ngokuphumla okufunekayo, usindiso lomntu okanye umfazi.
• Umthetho wokubamba ngumthetho oyimfuneko yobusana.
• Ubukhoboka bubuqili obukhulu.
Olongezelelweyo NgoAntoinette Brown Blackwell
UAntoinette Brown Blackwell Biography
Iqoqo le-Quote ehlanganiswe nguJone Johnson Lewis. Le ngqokelela engaqhelekanga ihlanganiswe kwiminyaka emininzi. Ndizisola ngokuba andinako ukubonelela umthombo wendalo xa ungabonakali kunye nesicatshulwa.
UDina weBhayibhile unemiba engaziwayo
Imithetho kaMasipala waseTexas kwiNqabileyo yokutshisa, ukuchithwa, ukusetyenziswa kakubi
Iipropati zezithuthi ezikhoyo
Isicwangciso sikaNowa Webster sokuguqula isiNgesi IsiNgesi
Yintoni i-Alphabet ye-NATO Alphabet?
Amanqaku amahlanu: I-New York's Most Famousest neighborhood